Zithini izibonelelo zokuthenga iiYure zokuBukela zikaYouTube?
Inceda ukuba ufikelele kwiiyure ze4,000 ukwenza imali kwisitishi sakho
Iiyure zokuBukela zinceda ukonyusa i-YouTube kunye neeNdawo zokuKhangela kuGoogle
Inkonzo iQALISA kwiiyure ze-24-72 kwaye iyaqhubeka mihla le kude kugqitywe
Ukuhanjiswa okuKhawulezileyo nokuQinisekisiweyo
Isebenza ngokuBalaseleyo ukuba uhambisa iVidiyo eMfutshane ye-15
Iindlela ezikhawulezayo zokunyusa iiyure zokubukela zikaYouTube
Ngokwengxelo ye-Statista, ngaphezu kweeyure ezingama-500 zeevidiyo zilayishwa kwiYouTube ngomzuzu ngamnye. Ngomxholo omninzi, inkqubo yokucebisa iziphumo ezifanelekileyo zokukhangela iba nzima. Ukuza kuthi ga kwiminyaka ethile emva, iYouTube ibikade ixhomekeke kwinani leembono kwiividiyo ukulungisa iziphumo zophando kunye neevidiyo ezicetyiswayo. Iikhrayitheriya zokugweba zikaYouTube zitshintshile kwaye, ngoku, iYouTube ithathela ingqalelo iimetriki ezininzi uku-odola iziphumo zokukhangela.
Imetric 'Ixesha lokubukela' ithathwa njengeyona nto iphambili yokumisela umgangatho kuYouTube. IYouTube ijonga ixesha elichithwa ngabantu bebukele iividiyo nokuba ziyanxibelelana na okanye hayi iividiyo zakho. Ayisiyombono nje, malunga nokuba abantu bahlala ixesha elingakanani kwiividiyo zakho. Ngelixa ukwandisa iimbono zakho kulula, kunokuba nzima ukonyusa ixesha lakho lokubukela ngokwasemzimbeni. Kulapho iiYTpals zinokukunceda khona. Unga thenga iiyure zokubukela zikaYouTube ukusuka kwi-YTpals ukwandisa iividiyo zakho kwiYouTube kunye nokukhangela amanqanaba okukhangela kaGoogle.
IsiKhokelo esiBanzi sokubukela ixesha
Ixesha lokubukela liyimetric emisela ukuba umxholo wakho ugcina ababukeli ixesha elingakanani. Ukwandisa ixesha lakho lokubukela kuya kufuneka wenze iividiyo zakho zibonwe ngakumbi kubabukeli. Phambi kokuba sifikelele kwiindlela zokwandisa ixesha lokubukela, makhe sijonge ngokufutshane kwimbali yomgangatho we-algorithm yeYouTube.
Ukuza kuthi ga ngo-2012, umlinganiselo ophambili wempumelelo yevidiyo ubugqalwa njengenani lokujongwa. Uluhlu lweevidiyo lugqitywe ngenani leembono ezongeziweyo. Oku kukhokelela ekusetyenzisweni okwandisiweyo kokusebenzisa izithiyelo zokucofa, ezinezihloko zevidiyo kunye nezithonjana ebezinenkxalabo kakhulu ngokucofa. Nangona ezi vidiyo zokucofa isithiyelo zingafumana inani elikhulu leembono, izinga lokugcinwa kwabaphulaphuli linokuba liphantsi kakhulu. Izinga eliphezulu lokutsiba libonise ukuba abasebenzisi abanelisekanga sisindululo. Ngenxa yoko, kwafunyaniswa ukuba inani lokujonga ayilophawu lubalaseleyo lomgangatho okanye ukufaneleka kwevidiyo.
UYouTube ubonile ukuba umlinganiselo ongcono wevidiyo sisixa sexesha elichithwa ngumsebenzisi kwividiyo. Xa umbukeli ebukela ividiyo kude kube sekupheleni, oko kubonisa izinga eliphezulu lokwaneliseka. Kuba uninzi lwengeniso yeYouTube yenziwa ziintengiso, kuya kuba sengqiqweni ukuba ifuna ababukeli babukele iividiyo ixesha elide. Abakhangisi bayayiqaphela iYouTube ngomgangatho wayo wempahla kunye nenyaniso yokuba yindawo yokubukela ividiyo yemihla ngemihla yabaphulaphuli.
Kungo-Okthobha ka-2012 apho i-algorithm entsha kaYouTube yasungulwa. Le algorithm intsha, esekwe 'kwixesha lokubukela' ithathele ingqalelo iividiyo ezigcina ababukeli bexakekile. UYouTube uqalise ukuhlengahlengisa umgangatho weevidiyo kwaye wawonga abo babonakalise ukubandakanyeka kwaye bagcina ababukeli kuYouTube elona xesha lide. Nge-algorithm entsha, ukubalwa kwembono kwakungasajongwa njengesigqibo sokuhlela umxholo.
Yintoni Ixesha lokubukela?
Ixesha lokubukela liphakathi kweemetriki ezininzi ezisetyenziswa nguYouTube ngenjongo ye-SEO. UYouTube uchaza ixesha lokuBukela njengelixa elidibeneyo lexesha elichithwe ngababukeli bakho bebukele ividiyo. Incwadi yokudlala yabadali bakaYouTube ikwachaza ukuba iividiyo ezonyusa ixesha lokubukela kwisiza zenzelwe ukuba zibonakale phezulu kwiziphumo zokukhangela kunye neevidiyo ezicetyiswayo. Akukho sicwangciso esinye esinokusetyenziswa ukwandisa ixabiso letshaneli yakho kunye neevidiyo emehlweni ababukeli. Ifuna indlela eneenkalo ezininzi. Unokuthenga iiyure zokubukela zeYouTube kwiYTpals. Ngaphambi kokuba sifike apho, kukho izinto ezithile malunga nexesha lokubukela likaYouTube ekufuneka uziqhelanise nalo.
Okokuqala, izinga lokugcinwa kwabaphulaphuli kunye noqikelelo lwemizuzu ebukelweyo zizinto ezimbini ezisondeleleneyo. Ubungakanani bexesha elichithwa ngababukeli kumxholo wakho lilinganiswa ngemizuzu okanye imizuzwana. Izinga logcino lwabaphulaphuli libhekisa kumndilili wexesha elichithwa ngumbukeli kumxholo wakho. Izinga lokugcinwa okuphezulu libonisa amandla evidiyo ukubamba ingqalelo yomsebenzisi. UYouTube ujonga indlela ividiyo yakho enegalelo ngayo kwixesha lokubukela lomsebenzisi kwindawo.
Okwesibini, iYouTube ithanda ixesha lokuBukela ngeseshoni nganye yomsebenzisi. Ixesha lokubukela alikhathali kuphela ngesixa sevidiyo yakho ebukelweyo kodwa negalelo levidiyo yakho kwixesha lokubukela lomsebenzisi othile kuYouTube. Ixesha leseshoni elikhethekileyo lababukeli libaluleke kakhulu kuYouTube, njengoko eyona njongo yabo kukugcina ababukeli banelisekile kwaye bebandakanyeka kwisiza ixesha elide.
Awuyi kufumana mvuzo ngexesha lokubukela ukuba wandisa ividiyo ye-30-yesibini ibe yimizuzu engama-20. Undoqo kukwenza iividiyo ezibandakanyekayo ezenza ababukeli banamathele ixesha elide. UYouTube ujonge umxholo owonyusa ixesha lokubukela labasebenzisi kwindawo.
Umzekelo wokuqonda ixesha lokubukela likaYouTube
Umsebenzisi ukhangela into ethile ngakumbi kuYouTube kwaye ubukele ividiyo yakho kuqala. Emva koko, umsebenzisi ubukela uthotho lweevidiyo ezinxulumeneyo. Kule meko, ixesha lokubukela liya kubandakanya ixesha lokubukela iseshoni elichithwe kolu ngcelele lweevidiyo. Ixesha lokubukela liya kuchaphazeleka kakubi ukuba ababukeli bashiya ividiyo kwaye baqhubele phambili ukwenza olunye uphando. Ixesha lokubukela liya kuchaphazeleka kakuhle ukuba iseshoni yokubukela entsha kaYouTube yenziwe ngumxholo wakho wevidiyo. Umzekelo, impembelelo ye-YouTuber esekiweyo iya kuqhuba iiseshoni zokujonga njengoko abasebenzisi beqhubela phambili ukubukela ezinye iividiyo ze-YouTuber ezinxulumeneyo.
Ukubaluleka kwexesha lokubukela likaYouTube
Ngoku siyazi malunga nexesha lokubukela, makhe sijonge ukubaluleka kwexesha lokubukela kumyili womxholo -
Umxholo woMgangatho ophezulu: Xa ababukeli behlala kwiividiyo zakho yonke indlela kude kube sekupheleni, oko kubonisa ukuba umxholo wakho weYouTube ukumgangatho ophezulu. IYouTube iya kuthi ekugqibeleni ithande iividiyo zakho kwaye yonyuse umgangatho wazo ngokuziphakamisa njengeevidiyo ezicetyiswayo.
Imali: Ukwenza imali kuYouTube ngokusebenzisana ne-AdSense, kubalulekile ukuba ixesha lakho lokubukela libe nomtsalane. Ngokomgaqo-nkqubo omtsha weYouTube, umxholo wakho kuya kufuneka ubuncinci ubune-4,000 yeeyure ezongezelekayo zokubukela ngonyaka kuYouTube ukuba ufuna ukufumana izibonelelo zokwenza imali.
Ukwaneliseka komsebenzisi: Ukuba ixesha lokubukela kwijelo lakho likaYouTube liyanda oko kuthetha ukuba ababukeli bakho bonwabile ngumxholo wakho. Oku kubonisa into yokuba uyakwazi ukutsala abaphulaphuli ababandakanyekayo.
Uzifumana njani iiyure ezibukelwe sisitishi sakho
Ngaphambi kokuba ufumane iindlela zokonyusa ixesha lakho lokubukela, kubalulekile ukujonga izibalo zesitishi sakho. Ukwenza oku, kufuneka uvule isitudiyo sabadali kuYouTube kwaye uvule ithebhu yohlalutyo kwimenyu esekhohlo. Kwiphepha le-analytics, khetha ukhetho lokujonga " iintsuku ezingama-365 zokugqibela emazantsi etshathi. Uya kuba nakho ukujonga iyonke imizuzu abantu abayichithile bebukele umxholo wakho. Ukuba amanani akho abonisa iiyure ezingama-240,000 okanye ezingama-4,000, ngoko uwele ngempumelelo umda wokwenza imali kwaye ukwindlela elungileyo.
Ukusebenzisa i-Analytics ukuze uqonde ukugcinwa kwabaphulaphuli
Abaphulaphuli bakho kulindeleke ukuba behle ngokuthe rhoqo ekuhambeni kwexesha, kodwa kukho amanqaku athile kwividiyo apho ukugcinwa kwabaphulaphuli bakho kunokuthatha ujiko olubukhali lokuhla. Kubalulekile ukuhlalutya imitha yogcino lwabaphulaphuli ukuqonda izizathu ezibangela ukwehla kogcino lwabaphulaphuli kwisitishi sakho. Ungafumana ngakumbi malunga nokugcinwa kwabaphulaphuli kwithebhu yohlalutyo ngezantsi kwecandelo lokujonga. Uya kukwazi ukufumana iincopho kunye neentlambo kwireyithi yokugcina abaphulaphuli, enokuthi idityaniswe namanqaku athile kwividiyo. Kukho iindlela ezithile onokuthi uhoye ingqalelo yabaphulaphuli bakho kwimizuzu yokuqala eli-15 yevidiyo yakho.
Makhe siqwalasele ezinye zazo.
Fika kwindawo ngokukhawuleza: Ukuba ividiyo yakho ichaza umbandela othile ontsokothileyo okanye inika isifundo ngento ethile, abaphulaphuli bafuna ukufikelela kumxholo ngoko nangoko. Ungaphela ucima ababukeli ukuba awufiki kumxholo ophambili ngokukhawuleza.
Susa Umculo we-Intro: Ukuba isingeniso kwividiyo yakho side kakhulu, ababukeli banokuphela belilahlile ijelo lakho. Ukongeza koku, abanye abadali bomxholo bachitha ixesha elininzi becela ababukeli ukuba "bacofe i icon yentsimbi". Kuyacetyiswa ukuba usigcine isingeniso sifutshane kwaye unike imboniso encinci yezinto eza kuthetha ngazo ividiyo yakho.
Musa ukusebenzisa Cofa izithiyelo: Kubalulekile ukusebenzisa izihloko zevidiyo ezichanekileyo kunye nee-thumbnails ezingalahlekisayo ababukeli. Ukuba wenza umxholo wokucofa, ababukeli baya kucaphuka kwaye banokungabuyeli kwisitishi sakho kwakhona. Enye indlela onokuthi uvuselele umdla ngayo kubabukeli bakho kukubonisa into ehlekisayo yencopho yengxelo yevidiyo.
Ulonyusa njani ixesha lokubukela kwijelo lakho likaYouTube
Ukuba ababukeli bachitha ixesha elininzi kwiividiyo zakho, ke i-algorithm yeYouTube iya kuqaqambisa isitishi sakho kunye neevidiyo kwizindululo zokukhangela. I-YouTube iphinde yachaza kwixesha elidlulileyo ukuba iya kugxila kwiividiyo ezandisa ixesha leseshoni yababukeli kuYouTube. Ayithathi ingqalelo kuphela ividiyo elandelayo ejongwe ngumntu emva kokubukela ividiyo yakho, kodwa ixesha lokubukela iividiyo ezilandelelanayo emva koko. Akukho sicwangciso sinye esinokusetyenziswa ukwandisa ixesha lokubukela kwijelo lakho. Enye yeendlela kukuthenga iiyure zokubukela kwiYouTube. Unokusebenzisa la macebiso alandelayo ngokudibanisa nokuthenga iiyure zokubukela, ukwandisa ixesha lokubukela isitishi sakho kunye nexesha lokubukela iseshoni yababukeli.
1. Yenza isingeniso sevidiyo yakho sibe namandla kwaye sibandakanye
Kubalulekile ukubamba abaphulaphuli kwasekuqaleni. Kudla ngokuthiwa imizuzwana yokuqala eli-15 yevidiyo ibalulekile ekutsaleni ingqalelo yabaphulaphuli. Incwadi yokudlala kaYouTube inezindululo ezithile zokwenza isingeniso samandla, esiqulathe -
Isakhelo sokuqala esinyanzelisayo: Isakhelo sokuqala sevidiyo kufuneka sibe sisinyanzelo, nokuba kukusetyenziswa kobuntu kunye nemiyalezo okanye ngokubonwayo.
Zibandakanye nababukeli: Kuya kufuneka uzame ukuthetha nababukeli ngokuthe ngqo, kwaye ubhekisele kubo bodwa endaweni yokuba ngabaphulaphuli.
Bavuse umdla wabo: Unokwenza ababukeli babe nomdla ngokwenza into okanye ubabuze umbuzo.
Umboniso wekliphu: Ungabonisa imboniso encinci yevidiyo engaphantsi kwemizuzwana eyi-15. Ngale ndlela abaphulaphuli bayazi ukuba balindele ntoni.
Abaphulaphuli bakho banokunamathela kwaye babukele umxholo wakho xa usebenzisa iindawo ezityebileyo zevidiyo ekuqaleni.
2. Musa ukusebenzisa i-clickbait
Yinyani eyaziwayo ukuba ucofa izithiyelo azisebenzi ukuba ufuna ukonyusa ixesha lokubukela kwiividiyo zakho. Rhoqo, baya kuba nesiphumo esichaseneyo njengoko ababukeli bebeya kukhangela omnye umxholo ukuba awusiphumezi isithembiso. Xa unikezela nge-thumbnail kunye nesihloko sevidiyo, kuya kufuneka uzame ukunika abaphulaphuli into abanokuyilindela kwividiyo. Ukuqala ividiyo enelogo entle okanye isingeniso kunokubonakala kupholile, kodwa eyona nto iphambili kukufikelela kwinqanaba ngokukhawuleza.
3. Sebenzisa izahluko ezifumaneka kwiividiyo
IYouTube inophawu oluhle olukuvumela ukuba wenze izahluko. Izahluko azilungile kuphela ukwahlula ividiyo ende ibe ziinxalenye, kodwa zikwavumela ababukeli ukuba babone okuza kulandela kwividiyo. Xa ufuna ukubandakanya izahluko kwividiyo yakho, kubalulekile ukwenza isigqibo ngamacandelo evidiyo. Icandelo ngalinye okanye isahluko kufuneka sibe nentshayelelo elungileyo kunye nebali elinika umdla. Ukwenza ulwandlalo olurhabaxa lwesahluko kwangaphambili kuya kuba luncedo kakhulu kule meko. Inyathelo elongezelelweyo onokuthi ulithathe kukongeza izahluko ezisekelwe kwizitampu zexesha. Ngale ndlela ababukeli banokutshintshela kwizitampu zamaxesha ezahlukeneyo ukuze babukele indawo ethile yevidiyo ende.
4. Faka iphathini yokuphazamisa
Iividiyo zakho kufuneka zibandakanye ababukeli ukuba ufuna ukonyusa ixesha lakho lokubukela. Ukusebenzisa iipateni zokuphazamisa kunokuba sisicwangciso esiluncedo kakhulu sokwenza iividiyo ezigcina ababukeli bebandakanyeka. Abantu bahlala bekruqukile xa iintlobo ezifanayo zokubonwayo kunye namabali aphindaphindwayo kwividiyo. Iindlela zokuphazamiseka kwepateni ezifana nokutshintsha i-engile yekhamera, imizobo ekwiscreen kunye ne-B-roll inokuthimba ingqalelo yababukeli. Ukuphazamiseka kwepateni kuyindlela etshintsha indlela yokuziphatha, ingcamango, okanye imeko ethile. Obu buchule buxhaswa yipsychology yokuziphatha kunye ne-neuro-linguistic programming. Xa ubandakanya izinto zepatheni zokuphazamisa, idala izinto ezibonwayo kunye neengxelo ezitshintsha ngokuqhubekayo kwaye zigcine ababukeli bebambekile.
5. Uhlalutyo lokukhuphisana kunye nophando lwegama elingundoqo
Ixabiso lamagama angundoqo kumxholo wevidiyo alinakungahoywa, yingakho kubalulekile ukuphanda amagama angundoqo athile kwi-YouTube ngelixa upapasha iividiyo zakho. Unokuphanda amagama angundoqo ngokusebenzisa isixhobo segama elingundoqo. Konke okufuneka ukwenze kukuchwetheza kwisihloko esinxulumene nomxholo kwaye umisele umdla wokukhangela wabaphulaphuli ngokuxhomekeke kumthamo wegama elingundoqo. Unokuqhuba uphando lwegama elingundoqo ngokusebenzisa iingcebiso ezizigqibezelayo kwiYouTube.
Uhlalutyo lokhuphiswano kufuneka kwakhona lwenziwe amaxesha ngamaxesha ukufumana uhlobo lomxholo amajelo okhuphisana nawo awenzayo. Uhlalutyo olukhuphisanayo luluncedo kakhulu ekufumaneni iithegi zevidiyo, amagama angundoqo, kunye namagqabantshintshi. Ulwazi olukhutshwe kuhlalutyo lokhuphiswano lunokusetyenziswa ukuphuhlisa ukuqonda kwabo kujoliswe kubo. Ikwanceda ekufumaneni izikhewu zomxholo onokuthi uzigcwalise ngomxholo wakho wevidiyo.
6. Sebenzisa ukubalisa amabali kwiividiyo zakho
Eyona ndlela ilungileyo yokugcina ababukeli bebandakanyeka kwiividiyo zakho kukwenza iividiyo zebali. Ukusebenzisa ibali kunokuba ngumbono omhle kubabukeli abafuna ukonwabisa ngelixa befunda. Unokucinga ngeendlela ezintsha kunye neendlela ezizodwa zokuhambisa umxholo wakho ngendlela yebali. Oku kuya kugcina ababukeli benomdla kwaye baya kuhlala bebukele iividiyo zakho, besonyusa ixesha lokubukela kwinkqubo. Xa usenza ividiyo, khumbula ukwenza umxholo okonwabisayo nokufundisayo ngaxeshanye. Kubalulekile ukucinga ngebali kuzo zombini iindlela zokubalisa nangendlela yokubonisa kwikhamera, nokuba inde kangakanani ividiyo.
7. Ukusebenzisana nabanye abadali bomxholo
Eyona ndlela ilungileyo yokonyusa ixesha lokubukela kuYouTube kukubambisana nabantu abanengqondo efanayo abayiqondayo injongo yebhrendi yakho. Xa usebenzisana nabanye abadali bomxholo, unokuzoba ababukeli abatsha kwaye wandise isiseko sabaphulaphuli bakho. Oku kube negalelo kwixesha lakho lokubukela, kwaye ikwanceda ekwandiseni ixesha lokubukela elongezelekayo lababukeli njengoko becofa umxholo ofanayo kwitshaneli yomdibanisi wakho. Ezi ntsebenziswano kufuneka zithathwe njengentsebenziswano kwaye kungekhona njengempembelelo yokuthengisa. Ngelixa ukuthengiswa kwempembelelo kukufumana abaphulaphuli abatsha benkonzo, intsebenziswano iyinyani kwaye isekelwe kumaxabiso okwabelwana ngawo.
8. Iividiyo ezinde
Ixesha lokubukela ividiyo nalo liyachatshazelwa bubude. Ngelixa ividiyo ende iyakwazi ukufumana isixa esikhulu sexesha lokubukela inababukeli abambalwa kuphela, ividiyo emfutshane inokufuna inani elikhulu lababukeli ukuze ifumane ixesha lokubukela elifanayo. Iividiyo ezinde zingcono ekwandiseni ixesha lokubukela, nangona kunjalo, eyona nto iphambili kukuba kufuneka zibandakanye ababukeli. Ezi vidiyo zinde kufuneka zenziwe kugcinwe engqondweni abaphulaphuli ekujoliswe kubo. Kuya kuba luncedo ukwandisa umxholo wakho wevidiyo okhoyo omfutshane. Unokucinga ngeendlela ezizodwa zokwandisa kumxholo. Nje ukuba impumelelo yeenguqu ezinde ifikelelwe, unokucima umxholo ofanayo okhoyo ngendlela yeevidiyo ezimfutshane.
9. Yenza uthotho lwevidiyo
Enye indlela entle yokwandisa ixesha lakho lokubukela kukwenza uthotho lwevidiyo. Ixesha lokubukela eliqokelelwe luthotho lweevidiyo linokuba likhulu. Oku kungenxa yokuba ababukeli baya kuhlala bebukele iividiyo ezinxulumeneyo. Olu chungechunge lunokugxila kumxholo othile okanye umngeni. Isenokude ibe ngohlobo lwebali. Ukuba uchungechunge lwakho lwevidiyo luyabandakanyeka, ababukeli baya kuhlala bebuyela kumxholo wakho, okuya kwandisa iiyure zokubukela ngokuhamba kwexesha. Xa ukhetha umxholo woluhlu lwevidiyo, kuyacetyiswa ukuba ukhethe iividiyo ezineembono ezininzi. Ungasebenzisa ezi vidiyo njengesiseko sokwenza umxholo omtsha.
10. Sebenzisa i-YouTube Analytics ukuqonda iimbono ezincinci kunye ne-macro
Unokufumana ulwazi oluhle malunga netshaneli yakho kwicandelo lohlalutyo likaYouTube. Unokufumana ulwazi olutsha malunga nokujonga okukhulu kunye nokuncinci kwijelo lakho. Uhlahlelo lweYouTube lukuvumela ukuba ujonge ababukeli ngeentsuku namaxesha. Ngaphandle koku, kukho ukhetho lokujonga idatha kwiividiyo ngokwazo. Kufuneka usebenzise icandelo le-analytics ukumisela amaxesha aphakathi kokuyeka kwabasebenzisi. Oku kuya kukunceda ekuphuhliseni ukuqonda iindlela onokunyusa ukubandakanyeka kwabaphulaphuli kwiividiyo zakho zexesha elizayo. Ekuphela kwendlela onokuthi wenze ngayo umxholo ubandakanyeke ngakumbi kubabukeli kukuqonda iimfuno zabo, yiyo le nto i-YouTube analytics ibonelela ngayo. Ungasebenzisa ulwazi ukulungisa umxholo wakho ngokweemfuno zabaphulaphuli.
11. Ukumisela ixesha elifanelekileyo lokuthumela
Iividiyo zakho kufuneka zifumaneke ukuba ufuna ukonyusa ixesha lokubukela kwitshaneli yakho. Kule nto, iividiyo kufuneka zibonakale kwiingcebiso zokukhangela ngexesha elifanelekileyo. Ngokophando olukwi-intanethi, elona xesha lifanelekileyo lokuthumela umxholo kuYouTube liphakathi kwemini. Oku kungenxa yokuba iiyure zokubukela zithathwa njengentsimbi yesi-8 ebusuku. Ukuqinisekisa ukuba ividiyo yakho iyavela ngexesha leeyure zokubukela, kufuneka ushiye ixesha elaneleyo lokuba ifakwe kwisalathiso. Esi siphakamiso sisebenza kakuhle ngeentsuku zeveki, nangona kunjalo, ukuba ufuna ukulayisha iividiyo ngeempelaveki, kufuneka kusetyenziswe isicwangciso esahlukileyo. Ngeempelaveki, kuya kuba ngcono ukuthumela iividiyo kwangethuba njengoko itrafiki ye-intanethi iphezulu ngeempelaveki.
12. Sebenzisa uludwe lweengoma lukaYouTube
Ukwandisa ixesha lokubukela, umbukeli akuyomfuneko ukuba abukele iividiyo zakho. Ixesha lokubukela linokwanda ukuba umsebenzisi ubukele uluhlu lokudlala olubandakanya iividiyo zabanye abantu nabo. Ukwenza uluhlu lokudlala kunokuba luncedo kakhulu kuwe, njengoko kukhokelela ababukeli abanokubakho kumava okubukela ngakumbi. Oku kukuvumela ukuba ube nefuthe kwiseshini yexesha lokubukela lilonke labasebenzisi. Ukwenza uluhlu lokudlala, konke okufuneka ukwenze kukulungelelanisa iividiyo zakho ngokulandelelana okunentsingiselo, kunye neziganeko ezifanelekileyo, izihloko, imiboniso, kunye nochungechunge zonke zihlanganiswe zibe yinto enye. Uluhlu lokudlala lukwanyusa ukubakho kweevidiyo zakho ezivela kwiziphumo zevidiyo ezicetyiswayo.
Xa usebenzisa inqaku loLuhlu lokudlalayo, inokuba luluvo oluhle ukulongeza ukuze ube namava okubukela ngcono. Ungasebenzisa inqaku lexesha lokuQala kunye nelokuGqibela ukuze iindawo zevidiyo zichazwe 'ngaphakathi' kunye 'no'phuma'. Unganciphisa ii-intro kunye nokuphuma kweevidiyo kuluhlu lwakho lokudlalayo ukwenza amava angenamthungo ngakumbi. Kwakhona, khumbula ukufaka uluhlu lokudlalayo kubadlali abafakelweyo kunye nephepha lesitishi seYouTube. Ungaqhagamshela kwiphepha lakho lokudlala ngokusebenzisa amanqakwana.
13. Sebenzisa iiSlates zokuphela kunye namakhadi
Kukho amaqhinga onokuwasebenzisa ukuze abantu baqhubeke nokubukela iividiyo zakho kunokucofa ngokukhawuleza. Enye yamaqhinga kukusebenzisa iKhadi kwiYouTube, evumela abasebenzisi ukuba bongeze ikhonkco kwiscreen sevidiyo. La makhonkco evidiyo akwimo yamakhadi aqhagamshela kwenye ividiyo, uluhlu lokudlala, okanye isitishi. Xa usebenzisa inqaku lamakhadi kaYouTube, iya kuba licebo elilungileyo ukubeka ikhadi apho abaphulaphuli bahlala behla khona. Oku kuya kuvumela umbukeli ukuba abukele ividiyo ehambelanayo kunokuphelisa ixesha lokubukela. Ukusebenzisa i-End Slates yenye inketho enkulu yokwalathisa ababukeli kwenye ividiyo ehambelanayo.
14. Faka iiTeasers
Rhoqo, ababukeli bakho banokuyeka emva kwemizuzwana embalwa, ngakumbi ukuba yividiyo ende. Kukho iindlela zokuqinisekisa ukuba ababukeli bakho bahlala ixesha elide. Unokucinga ngokubandakanya ii-teas ekuqaleni kweevidiyo zakho, ezishwankathela undoqo wevidiyo yakho. Aba bahlekisayo baya kunika ababukeli umbono malunga nento abanokuyilindela kwividiyo.
Ukuba isetyenziswe ngokuchanekileyo, iYouTube inokuba liqonga elihle lokuphuhlisa unxibelelwano lweemvakalelo kunye nabo baza kuba ngababukeli. Xa usebenzisa ezi zicwangciso zokwandisa ixesha lokubukela, awuzukufumana kuphela ababhalisile kunye neembono, kodwa kuya kuchaphazela ubudlelwane obunabo ababukeli bakho kunye nebhrendi yakho. Unako kwakhona thenga iiyure zokubukela zikaYouTube ukusuka kwi-YTpals kwaye usebenzise ezi zicwangciso ngokudibeneyo, ukwandisa ixesha lakho lokubukela kakhulu. Ngenkonzo ye-YTpals 'Thenga iiyure zokubukela kuYouTube, uya kukwazi ukufikelela kwiiyure ezingama-4,000 zokubukela kuYouTube, nto leyo eya kukunika ithuba lokwenza imali ngetshaneli lakho. Inkonzo iya kuqala kwiiyure ezingama-24-72 zokufaka iodolo.
I-YTpals ibonelela ngoluhlu lweenkonzo zeprimiyamu ukwenza isitishi sakho sikaYouTube siphumelele ngakumbi. Ukwazi ngakumbi, Qhagamshelana nathi namhlanje!
Iiyure zokuBukela zika-YouTube zongezwa kwinqwelo yakho.